Warkii ugu cuslaa oo kasoo kordhay dagaalkii Gumburka & Somaliland oo Tikniko kusoo gashay + Madaxweyne Gaas oo Burtinle......... - Xigasho.net | Xigasho.net
Warkii ugu cuslaa oo kasoo kordhay dagaalkii Gumburka & Somaliland oo Tikniko kusoo gashay + Madaxweyne Gaas oo Burtinle………
Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii ka socday deegaanka Gumburka ee gobolka Sool ayaa waxa la sheegay in uu haatan joogsaday kadib markii qaar kamid ah odayaasha dhaqanka Beeluhu ay kala dhex galeen Malayshiyaadkii ku dagaalamayey deegaankaasi.
Dhaawaca iyo dhimashada ka dhalatay dagaalkaasi ayaan weli la xaqiijin karin inkastoo warar madax banaan oo xigasho.net ay heshay ay sheegayaan in dhinacyadii dagaalamay ay ku naf waayeen dagaalkoodii ugu yaraan ilaa 20 qof oo ka kala tirsan, waxaana sidoo kale la soo sheegayaa in dhaawacu uu intaas kasii badan yahay.
Dagaalkii gaashaaman ee dagaalka iyo madaafiicda daran dooriga u dhaca ayaa la sheegay in la isku adeegsaday dagaalku intuu socday,
waxaana jira maxaabiis la kala qabsaday iyo dagaal dagaal oo goobtaasi ku gubtay oo mid walbaaba dhankiisa sheeganayo in uu isagu gubay amaba ku gacan sareeyey dagaalkaasi.
Malayshiyaadka Beelaha Cumar Maxamuud iyo Baharasame ee dagaalku u dhaxeeyey ayaa marar badan ku dagaalamay deegaano ka tirsan goboladda Mudug iyo Sool,
waxaana sidoo kale galabnimadii kusoo biiray dagaalkaasi sida la sheegay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Somaliland kuwaas oo bartilmaameedkoodu ahaa in ay weerar xoogan ku qaadaan madaxweynaha Puntland.
Madaxweyne C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa xiligani ku sugan degmada Burtinle ee gobolka Nugaal oo uu gaadhay maalintii shalay ahayd halkaas oo uu ka diray gudi kala dhex gasha Beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanka Gumbur.
Inkastoo ay weli wadaan odayaasha dhaqanka deegaanku waan waan nabadeed oo ku wajahan xiisada weli ka taagan deegaanka Gumbur ee gobolka Sool,
waxaana xusid mudan in Malayshiyaadka Beesha Cumar Maxamuud ay daba mar ku sameeyeen ciidamada Puntland xili saraakiil iyo odayaal ka tirsan Beesha Cumar Maxamuud ay ka hor taagnaayeen sii hurinta dagaalkii maanta.